သဘာဝအလျောက်အိပ်ပျော်စေသောနည်းများ - Hello Sayarwon
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာခံစားနေရတဲ့လူနာတွေကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အိပ်မပျော်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဆေးဆိုင်တွေမှာအိပ်ဆေးသွားမဝယ်ခင်အခုပြောပြသွားမယ့်သဘာဝနည်းလမ်းတွေကိုအရင်စမ်းကြည့်ပါ။ သင့်ကို အံ့သြသွားလောက်အောင် ကောင်းကျိုးတွေ ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
နို့ကအိပ်မပျော်ခြင်း ကိုကျော်လွှားနိုင်မယ့်အစားအသောက်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ နို့ကဦးနှောက်ကို melatonin ထုတ်ဖို့ကူညီပေးတဲ့ကယ်လ်စီယမ်ထုတ်ပေးပါတယ်။ နေ့စဉ်အိပ်ယာမဝင်ခင်နို့ပူပူလေးတစ်ခွက်သောက်ကြည့်ပါ။ နို့ရဲ့ကောင်းကျိုးကတော့သင့်ကိုအေးချမ်းစွာအိပ်စေမှာပါ။
ညဘက် ထိန်လင်းနေတာကသင့်ကိုအိပ်ငိုက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်အခန်းကမှောင်နိုင်သမျှမှောင်နေရပါမယ်။ ဒါ့အပြင်သင့်အနေနဲ့အိပ်ယာမဝင်ခင်ဖုန်း၊ TV နဲ့ကွန်ပျူတာစတဲ့လျှပ်စစ်ကိရိယာတွေနဲ့ ဝေးဝေးနေသင့်ပါတယ်။ အိပ်ခါနီးညအချိန်မှာဒါတွေကိုအသုံးပြုခြင်းကအလေ့အကျင့်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ဖျောက်သင့်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ကိရိယာတွေကထွက်တဲ့အလင်းရောင်ကသင့်ဦးနှောက်အတွက်မကောင်းပါဘူး။ အနည်းဆုံးညမအိပ်ခင်၁နာရီအလိုမှာလျှပ်စစ်ကိရိယာတွေအသုံးပြုခြင်းရပ်လိုက်ပါ။ တကယ်တော့သင့်အခန်းထဲမှာကိုကTV မထားသင့်ပါဘူး။ သင့်အကြိုက်ဆုံးတီဗွီအစီအစဉ်တွေလာရင်လည်း နောက်မှအခွေပြန်ဝယ်ကြည့်ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နှုန်းနဲ့လုပ်ချိန်အပေါ်မူတည်ပြီးသင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကိုတိုးတက်စေပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရသင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်အပူချိန်မြင့်လာပြီးပြန်လည်ထိန်းညှိဖို့အတွက် ခြောက်နာရီအချိန်ပေးရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ဖို့အတွက် ကိုယ်ကိုအေးစေပြီးမှအိပ်ယာဝင်သင့်ပါတယ်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေအရမနက်မိနစ်၃၀နှုန်းတစ်ပတ်လုံးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေက လေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်းလုပ်တဲ့၊ နောက်ကျမှလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေထက်အိပ်ရတာပိုအဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ်။ မနက်ခင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကအိပ်စက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးပေးပါတယ်။
သင့်ရဲ့အိပ်စက်တဲ့နေရာကိုသက်သက်ခွဲထားပါ။ တခြားလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တဲ့စားသောက်ခြင်း၊အလုပ်လုပ်ခြင်းစတာတွေနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာခွဲထားပါ။ ညသန်းခေါင်ကြီးနိုးလာတဲ့အခါကွန်ပျူတာ ၊ တီဗွီတွေသွားဖွင့်မယ့်အစားသင့်ကိုအိပ်ငိုက်စေမယ့်စာအုပ်ဖတ်တာဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါ။ တကယ်လို့သင်အိပ်ရေးပျက်တာများနေပြီဆိုရင်တော့သင့်အိပ်ခန်းကို သေချာပြန်စီစဉ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
တချို့အဆီတွေကအိပ်စက်ခြင်းအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းပြီးလာဗင်ဒါရနံ့ကလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ပါ။ ဒါကအကုန်အကျနည်းပြီးအဆိပ်အတောက်ကင်းတဲ့အိပ်စက်ခြင်းကိုကူညီပေးမယ့်အရာပါ။ လာဗင်ဒါဆီနဲ့မအိပ်ခင်ရေနွေနွေးနဲ့ရေချိုးခြင်းကသင့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုအေးချမ်းစေပါလိမ့်မယ်။ သင့်အနေနဲ့ ခေါင်းဦးပေါ်မှာလာဗင်ဒါဆီကိုဖြန်းထားလည်းရပါတယ်။
သင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုဘာကတားဆီးနေလဲဆိုတာသိဖို့ကနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အစားအစာ၊အထောက်အကူများ၊ဆေးဖက်ဝင်အပင်တွေကလည်းသင့်ကိုအေးချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်ဖို့ကူညီပေးမှာပါ။ ဒီနည်လမ်းတွေကသင့်ကိုအိပ်ပျော်ဖို့ကူညီရုံသာမကကြွက်သားတွေကိုလည်းပြေလျော့စေပါတယ်။ သဘာဝနည်းလမ်းတွေ၊ ဆေးဝါးတွေနဲ့တွင် အဆင်မပြေရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးပါ။
8 Natural Remedies That May Help You Sleep. http://www.health.com/health/gallery/0,,20306715,00.html.
Natural Sleep Solutions. http://www.webmd.com/sleep-disorders/living- with-insomnia- 11/natural-solutions.
10 Natural Ways to Sleep Better. http://www.healthline.com/health-slideshow/natural- sleeping-
Accessed December 10, 2016